स्टीवन वुड्सको साथ अन्तर्वार्ता: डिजिटल शारीरिक भाषा | Martech Zone
बुधबार, अक्टोबर 28, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
हिजो दिउँसो मलाई मेरो पहिलो गर्न खुशी थियो गुगल भ्वाइस पोडकास्ट स्टीवन वुड्स, CTO को साथ Eloqua र लेखकको डिजिटल शारीरिक भाषा। गुगल भ्वाइसले तपाईंलाई तपाईंको आगमन कलहरू रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ (press थिच्नुहोस् र रेकर्डि stop रोक्नको लागि प्रेस गर्नुहोस्) र तिनीहरूलाई सिधा तपाईंको गुगल भ्वाइस इनबक्समा राख्दछ। मैले सोचें कि साइटमा अडियो गर्नका लागि यो उत्तम तरिका हो!
म खान्छु। मैले स्टीवनलाई भेटें र उहाँसँगै प्यानलमा बस्न पाउने अवसर पाएँ अनलाइन मार्केटिंग समिट। यो उनको पुस्तक, कसरी मार्केटिंग विकसित भएको छ र कसरी मार्केटर्स पनि रचनात्मक देखि अधिक विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व प्रकार मा सर्दै छन् छलफल गर्न ठूलो थियो। अन्तर्वार्ताको साथमा ...
[अडियो: https: //martech.zone/wp-content/uploads/podcast/steve-woods.mp3]
यदि तपाइँ खेलाडी देख्नुहुन्न भने सुन्नको लागि पोष्टबाट क्लिक गर्नुहोस् स्टीवन वुडसको साथ अन्तर्वार्ता.
डिजिटल बॉडी भाषाको पछाडि आधार यो छ कि मार्केटरहरूले अनलाइन अवलोकन गर्न सुरु गर्नुपर्दछ चाल - ढाल खरीददारहरूको उनीहरूसँग प्रभावकारी रूपमा कुराकानी गर्न। हामी प्रत्येक दिन कुराकानीको साथ हाम्रो अनुहार सम्बन्धी सञ्चारको साथ यो गर्छौं। हामी सूक्ष्म शरीरको भाषा लिन्छौं र हामी कसरी व्यक्तिसँग कुरा गर्न जारी राख्छौं भन्ने कुरा मिलाउँछौं। यद्यपि यो अनलाईनमा प्रभावकारी ढ online्गले सम्पन्न भएको छैन। धेरै कम्पनीहरूले कसरी ग्राहकहरू उनीहरूको वेबसाइटमा वा उनीहरू मार्फत प्राप्त गरिरहेको अवलोकन गरिरहेका छैनन् ... तिनीहरू केवल ब्याच गर्न र मेसेज ब्लास्ट गर्न जारी राख्छन्। यो एक महान सादृश्य हो!
मलाई लाग्यो कि यो हाम्रो कुराकानीमा नोटहरू लेख्नु भन्दा रेकर्ड गर्न को लागी एक उत्तम अवसर हुनेछ। त्यहाँ गणना गर्न धेरै धेरै हाइलाइटहरू छन्, तर स्टीवले अन्तर्वार्ताको अन्तिम बजारलाई केही राम्रो सुरूवात पोइन्ट प्रदान गर्दछ।
टैग: डिजिटल बॉडी भाषाeloquaस्टीभन जंगल